Sports Archives - Sawirrotv
Tag Archive for: 'Sports'
Shirkadda NIKE oo Markii u Horeysay Dumarka Muslimiinta u Samaysay Dhar ay Isboortiga ku Ciyaaraan (VIDEO)
March 08, 2017 – Shirkadda NIKE ee soo saarista dharka iyo kabaha Isboortiga ayaa markii u horeysay soo bandhigay qorshe ay ku howlanayd sanado badan oo ay ugu talagashay haweenka Muslimka ah ee ka qayb qaata ciyaaraha caalamiga ah ee adduunka, waxa ayna haatan suuqyada soo gelisay xijaab ay ugu talagashay haweenka Muslimka ah ee …
Gabdhaha Gobolka Banaadir oo ku Guulaystay Ciyaarihii Kubada Koloyga ee Maamul Goboleedyada (VIDEO)
December 27, 2016 – Waxaa shalay galab ciyaarihii kubadda koloyga ee tartanka gabdhaha Maamul goboleedyada dalka lagu soo gaba gbeeyay magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland. Gabdhaha gobolka Banaadir, ayaa ku guulaystay Koobka Kubadda Kolayga gabdhaha Soomaaliyeed ee ka soconayay magaalada Garoowe ee Puntland. Hadaba kooxdii ka socotay Gobolka Banaadir ee ciyaaraha Kubadda Kolayga Gabdhaha …
Isku aadka Kooxaha Koobka Champions League-ga oo Maanta la Shaaciyay
December 12, 2016 – Waxaa maanta la soo bandhigay isku aadka wareega 16-ka ee Koobka Champions League, iyadoo wareegani ay isku soo aadeen kooxo adag oo qaarkood horay loo saadaalinayay inay isku aadi doonaan. Kooxda Arsenal oo lixdii sano ee u dambeysay ay wareegan 16-ka labo jeer isku aadeen Bayern Munich ayaa hadana mar kale …
Wiil uu Dhalay feeryahankii Kimbo Slice oo Buuxiyay Booskii Aabihiis (VIDEO)
December 05, 2016 – Wiil uu Dhalay feeryahankii caanka ahaa ee Kimbo Slice ayaa waxa uu hadda buuxiyay booskii uu aabihii ka geeriyooday, Wiilkan oo Lagu magacaabo Kevin Ferguson Jr ayaa laba maalin ka’hor ka qaybqaatay ciyaartiisii ugu horeysay. Kevin ayaa u qaab eg aabihii, waxaana uu u dagaalamaa sidii aabihii lagu yiqiinay oo ah …
Diyaarad Siday Ciyaartooy Barazil ka soo Jeeda oo ku Dhacday Dalka Colombia (VIDEO)
November 29, 2016 – Diyaarad ay saarnaayeen ciyaartooy ka soo jeeday dalka Barazil iyo shacab kale oo gaarayaya ku dhawaad 100 ruux oo rakaab ah ayaa diyaaradii ay saarnaayeen ku dhacday duleedka magaalada Medellin ee kutaala waqooyiga dalka Colombia. Diyaaradaha gurmad deg deg ah ayaa baadi goob xoog leh ugu jira sidii ay u heli …
Kooxda LL PP Jeenyo oo Maanta ku Guulaysatay Koobka Kubadda Cagta ee Jeneraal Daa’uud (SAWIRRO)
October 30, 2016 – Waxaa maanta ciyaar xiiso badan oo aheyd finalka Koobka Jeneraal Daa’uud ku dhexmartay Garoonka Kubadda Cagta ee Banaadir Stadium Labada Kooxood ee kala ah Banaadir Sports iyo LPP Jeenyo . Labada Naadi oo ah kuwo isku quwad ah ayaa waxay labadooduba soo bandhigeen cayaaro aad u xiisa badan, iyadoo naadiga Banaadir Sports Club …
Wiil 13 Jir Afrikaan ah oo Beerta Galiyay Xulka Da’yarta Barcelona (VIDEO)
October 08, 2016 – Wiil 13 jir ah oo waalidkiis ay ka soo jeedaan dalka Ivery Coast, laakiin isaga ku dhashay dalka Ingariiska ayaa waxa uu qabsaday barta Social-mediaha ee ay ku kulmaan shacabka isu aragtida ah ee jecel ciyaarta kubadda cagta. Wiilkan 13 jirka ah ayaa lagu magacaabaa Karamoko Dembele, waxa ayna qubarada ku xeeldheer …
Documentery Laga Diyaariyay Dhalinyaro Soomaaliyeed oo Minneapolis Lagu soo Bandhigayo (VIDEO)
October 07, 2016 – Filim documentary ah oo ku saabsan labo wiil oo dhalinyaro ah oo ka tirsanaa xulka qaranka ee Soomaaliya markii uu dalka ka socday dagaalka, ayaa maalinta sabtida lagu soo badhigayaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Filimkan oo lagu magacaabo Men in the Arena ama Raggii Garoonka Kubadda dhex joogay ayaa waxa …
September 30, 2016 – Baraha lagu kulmo ee Social Media-ha ayaa waxaa qabsaday muuqaalka wiil la sheegay inuu yahay sideed jir oo neeftii ku celiyay wiilashii faciis ahaa ee ay ciyaarta Rugby-ga wada ciyaaraan. Wiilkan ayaa la sheegayaa inuu ku noolyahay dalka Australia, waxaana dadiisa rasmiga ah ay tahay 8 jir, laakiin marka aad barbar …